HomeAfaan OromooHiriira Wayyee Magaala Finfinnee fi Buqa’insa Ummata Oromoo irra Gahaa jiru
Magaalaan Finfinnee Hektaara (54,000ha) kan jedhu shiraafi gidiraa wayyaaneen qonnaan bulaa oromoo qe’eefi qabeenya ittin dhabsiiftedha. Baldhinni magaalaa Finfinnee inni dhugaan heektaara (20,000ha) qofa. Hektaarri kumni (34 000ha) lafa qonnaan bulaa Oromoo irraa buqqisuun humnaan qabamee gara magaalaatti jijjiiramedha.
Daangaan Magaalaa Finfinnee bakka duriitti kektaaraa (20,000ha) irratti deebifamtee daangeeffamuun sararamuu qaba!!. Kana bulchiinsii Magaalaa Finfinnee daddaffiin hojirraa olchuu qaba!!
Lafti heektaarri kumni sodomii afur(34,000ha) humnaan qotee bulaa Oromoo irraa buqqisuun qabame Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jala galee Magaalaa Adda Oromiyaa Naannawaa Finfinnee jala galuu qaba!! Magaaloonni kunneenis akkuma kaartaa irraa argitan kanatti :
✔Kolfee Qaraani’oo fi
Qonnaan Bultoota Oromoo lafa guddaa kana irraa buqqifamanii lubbuun jiraniif, kanneen Lubbuun hin jirree ijoollee isaaniifi maatiin isaanii Barbaadamee Qubsiifamuu qaba, beenyaan ga’aanis kanfalamuufi qaba.
Ilmaan Oromoo daldaltootaaf magaalota kanneen keessatti haalli daldalaa mijeeffamuufi qaba. Kanneen hojjettoota ta’aniif manni jireenyaa kennamuufi qaba. Bulchiinsii Mootummaa naannoo Oromiyaa adeemsa kana irratti daddaffiin tarkaanfii sirreessuu fudhachuu qaba.
Bakkeewwan har’a hiriirri godhamaa jiru. Sadaasa 24/2011 (December 3, 2018)
9. Sayyoo Noolee Ganda lalistuu Geecoo
13. Ganda Baadiyyaa Maqa Najjoo
14. Jimmaa Hoorroo
1 5. Baakkoo
1 6. Burayyuu
18. Iluu Abbaa Booraa
19. Madda Walaabuu.
Magaalota Oromiyaa hedduu keessatti hiriirri mormii ajjeechaa balaaleffatu bahame
Jarri Lafa qotee-bulaa Oromoo irraa fudhatanii gamoo irratti ijaaratan, lafti qotee-bulaaf deebi’ee waggaatti kiraa itti kafaluufii qabu. Nagaroon kana qofa.
The disposseessed farmers must regain permanent possession of their land. No colonization by aliens!